Kungakhathaliseki ukuba umgangatho wezinto ezibhakiweyo, awukwazi ukuthelekisa ibhinti ezenziweyo nantoni na! Abapheki bezobugcisa bacebisa ngaphambi kokuba baqalise inkqubo yokupheka iimveliso zokubhaka, ngokuqinisekileyo bahluthe iimveliso ezixutywayo (umgubo, ishukela, i-cocoa) ngokusebenzisa umqubo wepuphu. Iimveliso ezifakwe phantsi azikhangeli nje kuphela iinqwelo ezincinci ezinjengama-husks nezinambuzane, kodwa zifumana ukufana, zizaliswe ngomoya kwaye ziqikelelwe ngokuchanekileyo. Isihlunu sokususa umgubo kukuvumela ukuba wenze inhlama eluhlaza, ngokumangalisayo ithambile. Kwakungelona nto ukuba kwiintsuku ezindala ubudala, ebhakawa e-fried fried, yayibizwa ngokuba "isihlunu" kwaye yayixabisa ngaphezu kwesonka "esinomlilo", ebhakawa kukudla.
Ama-sieves ahluke ngobubanzi kunye nobukhulu beeseli: encinci iseli, ngakumbi uqaphele umkhiqizo omkhulu. Kwakhona ama-sieves anamhlanje ahlukeneyo ekwakhiweni nakwizinto ezivela kuyo.
Umsila womthi womgubo ngumkhwa wendawo yekhitshi. Ama-sieves yokuqala ayengumkhonto wokhuni kunye negridi ye-horsehair eqhelekileyo, ngokuqhelekileyo babebizwa ngokuthi "isihlunu" eRussia. Kancinci igridi yatshintshwa yintambo yensimbi yenziwe ngentambo encinci, kwaye kunye nokuveliswa kwezinto zokwenza izinto zokwenziwa kwendwangu, iintambo zeyiloni zaqala ukusetyenziswa. Isibambo sisoloko senziwe ngeplastiki okanye kwisinyithi. Nangona abanye oomama ngoku sele bekhetha i-sieve yeenkuni, becinga ukuba izinto ezinjalo zinobuhlobo bendalo.
Imijelo yensimbi yanamhla yokupasa iyenziwa ngophawu olungenasipuni. Ukulungelelanisa, isixhobo sisoloko sixhotywe nge-handle one (njenge-scoop) okanye iimbambo ezimbini ezenziwe ngeplastiki okanye kwi-plastiki ebhoxisiwe. Isihlunu sensimbi sinokuhlamba ngokukhuselekileyo kwi-dishwasher.
Kuyinto elula kakhulu ngoncedo lwegundwe-siweyo ngomgubo wokucoca iimveliso ezirhwexayo ngqo kwisitya sokupheka. Umgca wale mveliso uxhotyiswe ngumbutho okhethekileyo ngendlela ye-asterisks ezimbini kwi-lever. Ngenxa yokujikelezwa kwamahhala kweprocket esezantsi, umgubo udlula ngaphandle kokulibazisa ngokusebenzisa iiseli, kuba amaqabunga aphula izibonda, kwaye zonke izinto ezingcolileyo ezingaphandle zihlala emnatha. Indlela yokulawula isesibambisini sesihlunu. Xa ucinezela ukhiye, izithambiso zentsimbi zentsimbi, i-blade iyajikeleza kwisihlwanyiso somatshini ngomgubo, kwaye umkhiqizo uphethiweyo. Esi sixhobo sineenkampani ezimbini, eziqinisekisa ukuqina, kunye nesilinganisi sokulinganisa.
I-sieving engafaniyo ayivumeli kuphela ukuhlwayela umgubo wokubhaka, kodwa ikwahlula iziqwenga zenyama okanye intlanzi, kunye nokuhambisa i powder kwi-sugar powder okanye i-cocoa kwi- donuts , imiqulu, iigwele kunye nezinye iimveliso zokubhaka.
Yima i imingxube
Umgaqo wokusebenza kwabaxhasi bamanzi
Ungaxhuma njani i-Skype?
Kutheni i-microwave ingashushu?
Yiyiphi i-multivark yokukhetha?
Yiyiphi i-steamer engcono okanye i-generator?
Amaphuzu avelele kwiTV - yintoni na?
Trailer ye motoblock
Umnxeba kunye no-humidifier
Isifo sikashukela sikhatywe kwiikati
Ikhefu leSizwe eNorway
Ungondla njani umvundla?
Izakhiwo zezemidlalo zezingane zokuhlala ehlobo
24 "i-sauce" evuthayo eya kukuqhuma
Ukuqinisekiswa kwimihla ngemihla
Iimpawu ze-Irritable Bowel kunye neNyango
Iqela le-Gangster - yintoni ukugqoka?
I-ravioli eyakhayo kakhulu
Kutheni i-seedling ijika?
I-Herpes yohlobo lwe-6 kubantwana
Utywala we-chokeberry emnyama
Ukuphosa ngokucoca kunye nebhakethi
I-Puer tea - Properties
Amakhanda ezinwele eziphathekayo kunye nama-bangs
Zingaphi iikhalori ezikwilwanyana ephekiweyo?
Umzimba omnyama ovary